Madaxweyne Cabdiweli oo maanta oo Khamiis ah u safraya Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Cabdiweli oo maanta oo Khamiis ah u safraya Gaalkacyo
June 30, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa la filayaa maanta oo Khamiis ah inuu u safro magaalada Gaalkacyo, sida ay sheegeen saraakiil dowlada ah.
“Maanta Madaxweynaha wuxuu safar ugu baxayaa Gaalkacyo si uu wax uga qabto xaalada amaanka magaalada sidoo kalena uu ula kulmo bulshada reer Gaalkacyo,” sidaa waxaa Puntland Mirror u sheegay sarkaal dowlada katirsan oo magaciisa codsaday in aan la isticmaalin.
Warsidaha Puntland Mirror ayaa ogaaday in Madaxweynaha ay u qorshaysantahay inuu xilka ka qaado duqa degmada Gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugaal uuna kala diro golaha degaanka ee degmada.
Xaalada amaanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa soo xumaanaysay. Inta lagu jiray bisha Ramadaan ugu yaraan saddex qof oo dowlada katirsan ayaa lagu dilay magaalada.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed cali ayaa safar shaqo ku tagi doona magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari maalinta Jimcada, sida ay ilo-wareedyadu sheegaayaan. Inta uu safarkiisa Boosaaso ku guda jiro, Madaxweyne Cabdiweli [...]